Ny azo antoka ny famonjena - Church of God Switzerland of the World
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2020-04 > Ny azo antoka ny famonjena
Niady hevitra hatrany hatrany i Paoly ao amin'ny Romana fa adidintsika amin'i Kristy ny fiheveran'Andriamanitra antsika ho marina. Na dia manota aza isika indraindray, ireo fahotana ireo dia isaina amin'ny toetra taloha niaraka nohomboana tamin'i Kristy. Ny fahotantsika dia tsy miankina amin'ny toetrantsika ao amin'i Kristy. Adidintsika ny miady amin'ny ota mba tsy ho voavonjy, fa satria efa zanak'Andriamanitra isika. Ao amin'ny tapany farany amin'ny toko faha-8, nitodika tany amin'ny hoavintsika be voninahitra i Paoly.
Izao rehetra izao navotan'i Jesosy
Tsy mora foana ny fiainana kristianina. Mandreraka ny ady amin’ny ota. Ny fanenjehana mitohy dia mahatonga ny maha-Kristianina ho sarotra. Ny fiatrehana ny fiainana andavan'andro ao anatin'ny tontolo lavo, miaraka amin'ny olona tsy miraika, dia manasarotra ny fiainantsika. Hoy anefa i Paoly: “Matoky aho fa izao fahoriana izao dia tsy mampandanja ny voninahitra haseho amintsika.” ( Romana 8,18).
Tahaka ny niandrasan'i Jesosy ny hoaviny fony izy teto an-tany tamin'ny naha olombelona azy, dia toy izany koa no andrasantsika ny ho avy mahafinaritra tokoa ka hoatran'ny tsy misy dikany ny fitsapana antsika ankehitriny.
Tsy isika irery no handray soa amin'izany. Nilaza i Paul fa misy ambangovangony eo amin'ny planeta Andriamanitra izay miasa ao anatintsika: "Fa ny fiandrasan'ny zava-manan'aina dia miandry ny fisehoan'ny zanak'Andriamanitra" (and 19).
Ny fahariana dia tsy te hahita antsika amin'ny voninahitra fotsiny, fa ny zavaboary koa dia hotahina amin'ny fiovana rehefa vita ny drafitr'Andriamanitra, araka ny nolazain'i Paul ao amin'ny andininy manaraka: «Ny famoronana dia iharan'ny tsy fahamendrehana - tsy misy finiavana fa amin'ny alàlan'ilay nanoa azy ireo - fa tamin'ny fanantenana; satria ny zavaboary koa dia hafahana amin'ny fanandevozan'ny tsy fahatanterahana mankany amin'ny fahalalahana be voninahitr'ireo zanak'Andriamanitra ”(andininy 20-21).
Mihena ny famoronana ankehitriny, saingy tsy izany no tokony ho izy. Amin’ny fitsanganana amin’ny maty, raha omena antsika ny voninahitra izay tokony ho an’ny zanak’Andriamanitra, dia ho afaka amin’ny fanandevozana koa izao rehetra izao. Izao rehetra izao dia voavotra tamin’ny alalan’ny asan’i Jesosy Kristy: “Fa sitrak’Andriamanitra ny hamela ny be rehetra hitoetra ao aminy, ary amin’ny alalany no hampihavanany ny zavatra rehetra aminy, na ety an-tany, na any an-danitra, amin’ny fanaovana ny fihavanana amin’ny Rany eo amin’ny lanitra. hazo fijaliana » (Kolosiana 1,19- iray).
Na dia efa voaloa aza ny vidiny, mbola tsy hitantsika daholo ny zava-drehetra satria hotanterahin'Andriamanitra izany. "Fa fantatsika fa hatramin'izao dia misento sy miasa ny zavaboary rehetra" (and 22).
Ny fahariana dia mijaly toa ny fanaintainan'ny asa, satria mandrafitra ny vohoka izay nahaterahantsika: "Tsy izany ihany, fa isika koa, izay manana ny Fanahy ho fanomezana voaloham-bokatra, dia mitoloko ao anatintsika ary maniry mafy ny maha-Zanaka, fanavotana ny vatantsika ”(andininy 23).
Na dia nomena antsika ho fianianana famonjena aza ny Fanahy Masina dia miady koa isika satria mbola tsy tanteraka ny famonjena antsika. Miady amin'ny ota isika, miady amin'ny fetra ara-batana, fanaintainana ary fijaliana - na dia mankafy ny zavatra nataon'i Kristy ho antsika aza ary mbola manohy manao amintsika.
Ny famonjena dia midika fa tsy hiharan’ny fahalovana intsony ny vatantsika, fa hohavaozina sy hovana ho voninahitra: “Fa ity mety lo ity tsy maintsy hitafy ny tsi-fahalòvana, ary ity mety maty ity tsy maintsy hitafy ny tsy fahafatesana” (1. Korintiana 15,53).
Ny tontolo ara-nofo dia tsy fanariam-pako tokony ariana - Andriamanitra no nanao azy tsara ary havaoziny indray. Tsy fantatsika hoe ahoana ny fitsanganan'ny vatana amin'ny maty, ary tsy fantatsika ny fizika amin'ny tontolo nohavaozina, fa afaka matoky ny Mpamorona hamita ny asany isika. Tsy mbola mahita zavaboary tonga lafatra isika, na eo amin'izao rehetra izao, na ety an-tany, na amin'ny vatantsika, fa matoky isika fa hovana ny zava-drehetra. Tahaka ny nilazan'i Paoly hoe: "Fa amin'ny fanantenana no hamonjena antsika. Fa ny fanantenana hita dia tsy fanantenana; satria ahoana no ahafahanao manantena ny zavatra hitanao? Fa raha manantena izay tsy hitantsika isika, dia miandry azy amin'ny faharetana. ”(And. 24-25).
Miandry am-paharetana sy amin-jotom-po ny fitsanganan'ny vatantsika isika. Efa navotana isika, fa tsy voavotra ihany. Efa nafahana tamin'ny fanamelohana isika, fa tsy amin'ny fahotana tanteraka. Efa ao amin'ny fanjakana isika, saingy mbola tsy ao amin'ny fahafenoany. Miaina amin'ny lafiny amin'ny taona ho avy isika raha mbola miady amin'ny lafin'ity vanim-potoana ity. «Toy izany koa ny fanahy no manampy ny fahalementsika. Fa tsy fantatsika izay tokony hivavahana, araka ny tokony ho izy, fa ny Fanahy Masina mihitsy no miditra ho antsika amin'ny fitarainana tsy azo tononina. ”(And. 26).
Fantatr’Andriamanitra ny fetra sy ny fahadisoantsika. Fantany fa malemy ny nofontsika. Na dia mazoto aza ny fanahintsika, dia miditra an-tsehatra ho antsika ny fanahin’Andriamanitra, na dia mila zavatra tsy azo ambara aza. Tsy manaisotra ny fahalementsika ny Fanahin’Andriamanitra, fa manampy antsika amin’ny fahalementsika. Izy no mampifandray ny elanelana misy eo amin’ny taloha sy ny vaovao, eo amin’izay hitantsika sy izay nohazavainy amintsika. Ohatra, manota isika rehefa te hanao ny tsara (Romana 7,14-25). Hitantsika eo amin’ny fiainantsika ny ota, ambaran’Andriamanitra fa marina isika satria hitan’Andriamanitra ny vokany, na dia vao nanomboka aza ny fiainana ao amin’i Jesosy.
Na eo aza ny tsy fitovizan'ny zavatra hitantsika sy izay heverintsika fa tokony ho izy dia afaka matoky ny Fanahy Masina isika hanao izay tsy vitantsika. Hamoaka antsika Andriamanitra: "Fa izay mandinika ny fo no mahalala izay alehan'ny sain'ny fanahy; fa miditra an-tsehatra ho an'ny olona masina araka izay sitrak'Andriamanitra izy ”(andininy 27). Momba antsika ny Fanahy Masina manampy antsika hahafahantsika matoky. Na eo aza ny fisedrana antsika, ny fahalementsika sy ny fahotantsika, "Fantatsika fa ny zavatra rehetra dia tsara ho an'izay tia an'Andriamanitra, dia izay nantsoina araka ny toroheviny" (and. 28).
Tsy Andriamanitra no namorona ny zava-drehetra, mamela azy ireo Izy ary miara-miasa aminy araka ny didiny. Manana drafitra ho antsika Izy ary azontsika antoka fa hahavita ny asany ao anatintsika Izy. “Matoky aho fa Izay nanomboka ny asa tsara ao anatinareo no hahavita izany koa mandra-pahatongan’ny andron’i Kristy Jesosy.” (Filipianina) 1,6).
Koa niantso antsika tamin'ny alàlan'ny Evanjely Izy, nanamarina antsika tamin'ny alàlan'ny Zanany ary nampiray antsika taminy tamin'ny voninahiny: «Ho an'ireo izay nofidiny, dia notendreny koa fa hitovy endrika amin'ny Zanany izy, mba ho Lahimatoa amin'ny rahalahy maro. Fa ireo izay efa notendreny mialoha, dia nantsoiny koa; fa izay nantsoiny no nohamarininy koa; fa izay nohamarininy no nomeny voninahitra koa ”(andininy 29-30).
Ny hevitry ny fifidianana sy ny lahatra mialoha dia iadian-kevitra be. Tsy mifantoka amin'ireo teny ireo i Paul eto, fa miresaka fifidianana ho famonjena sy fiainana mandrakizay. Eto izy, rehefa manakaiky ny fara-tamponny fitoriana ny filazantsara dia maniry hanome toky ny mpamaky izy ireo fa tsy mila miahiahy momba ny famonjena azy ireo. Raha eken'izy ireo izany dia ho azy ireo koa. Ho fanazavana ara-pitenenana, dia niresaka momba an Andriamanitra efa nanome voninahitra azy ireo aza i Paoly tamin'ny fampiasana ny fotoana taloha. Tsara toy ny nitranga ihany. Na dia sahirana eto amin'ity fiainana ity aza isika dia afaka miankina amin'ny voninahitra amin'ny manaraka.
Mihoatra noho ny mpifoka tafahoatra fotsiny
«Inona no tiana holazaina momba izany ankehitriny? Raha momba antsika Andriamanitra, iza no hahatohitra antsika? Ary iza no tsy niantra ny zanany lahy, fa natolony hamonjy antsika rehetra izy? (Andininy 31-32).
Koa satria lavitra Andriamanitra nanome ny Zanany ho antsika fony mbola mpanota isika dia afaka mahazo antoka fa hanome antsika izay ilaintsika Izy mba hahatanteraka izany. Azontsika antoka fa tsy ho tezitra amintsika izy ary hanaisotra ny fanomezana. «Iza no hiampanga ny olom-boafidin'Andriamanitra? Eto Andriamanitra izay manamarina ”(and. 33). Tsy misy olona afaka miampanga antsika amin'ny Andro Fitsarana satria Andriamanitra nilaza fa tsy manan-tsiny isika. Tsy misy olona afaka manameloka antsika, satria miaro antsika i Kristy Mpanavotra antsika: «Iza no hanameloka? Eto i Kristy Jesosy, izay efa maty, ary tsy izany koa, izay natsangana koa, izay eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika »(andininy 34). Tsy vitan'ny hoe manana sorona noho ny fahotantsika fotsiny isika, fa manana Mpamonjy velona koa izay miaraka amintsika hatrany amin'ny lalan'ny voninahitra.
Ny fahaiza-manao kabary nataon'i Paoly dia aseho amin'ny faran'ny farany mampihetsi-po amin'ity toko ity: "Iza no te hampisaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana sa tahotra sa fanenjehana sa hanoanana sa fitanjahana sa loza sa sabatra? Araka ny voasoratra hoe: Fa noho ny aminao no namonoana anay mandrakariva; hajaina toy ny ondry hovonoina izahay »(andininy 35-36). Afaka mampisaraka antsika amin'Andriamanitra ve ny toe-javatra? Raha novonoina noho ny finoana isika dia efa resy tamin'ny ady? Na ahoana na ahoana dia tsy nilaza i Paoly hoe: "Fa amin'izany rehetra izany dia manoatra isika amin'ny alalan'ilay tia antsika" (and 37).
Tsy resy amin'ny fanaintainana sy ny fijaliana koa isika - tsara kokoa noho ny mpandresy isika satria mandray anjara amin'ny fandresen'i Jesosy Kristy. Ny lokan'ny fandresena - ny lovantsika - dia voninahitr'Andriamanitra mandrakizay! Lehibe noho ny vidiny io vidiny io.
"Fa fantatro fa na ny fahafatesana, na ny fiainana, na ny anjely, na ny fahefana, na ny mpanapaka, na ny ankehitriny na ny ho avy, na ny ambony, na ny lalina, na ny zavaboary hafa, tsy mahay manavaka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'i Kristy Jesosy Tompontsika" ( Andininy 38-39).
Tsy misy mahasakana an Andriamanitra amin'ny drafitra nomeny anao. Tena tsy misy mahasaraka anao amin'ny fitiavany! Tena tsy misy mahasaraka anao amin'ny fitiavany! Afaka matoky ny famonjena ianao, ny ho avy mahafinaritra amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra izay nomeny anao tamin'ny alalàn'i Jesosy Kristy!